Mucjiso:Gabar curyaan ah oo afkeeda ku sawirtay inqilaabkii Turkiga. | puntlandi.com
Mucjiso:Gabar curyaan ah oo afkeeda ku sawirtay inqilaabkii Turkiga.
Gabar reer Afganistan ah oo kamid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba ayaa ku dhaqaaqday arrin mucjiso ah,kadib markii ay afkeeda ku sawirtay farshaxan muujinaya qaabkii loo fashiliyey inqilaabkii dhicisoobay ee dalka Turkiga,sida ay qortay warbaahinta dalka Afganistan.
Roubaba Mohammedi oo ay go’anyihiin lugaha iyo gacmaha ayaa afkeeda ku sawirtay farshaxankaan oo lagu muujinayo qaabkii loo fashiliyey inqilaabka dhicisoobay ee 15 July ee sannadkii hore ka dhacay dalka Turkiga,waxayna codsatay in laga gaarsiiyo madaxweyne Erdogan.
Farshaxankan oo ah mid si layaableh loo muunadeeyey ayaa waxa ka muuqda sawirro dareen bixinaya iyo rasaas hoobanaysa,waxaana la filaya in farshaxankaan la soo gaarsiiyo madaxweynaha Turkiga.
Roubaba oo ah 16 jir ku nool gobolka Gazni ee dalka Afganistan ayaa farshaanno cajiib ah hore u soo bandhigtay,iyadoo aan wax macallin ah u helin xirfaddaan aadka u sarreysa,balse ay u muuqato mid alle ku mannaystay.